Mboro yake yainyura ichiita kutsemura beche rangu zvishoma nezvishoma - Masasi eHarare
DzeBonde Mboro yake yainyura ichiita kutsemura beche rangu zvishoma nezvishoma
Mboro yake yainyura ichiita kutsemura beche rangu zvishoma nezvishoma
Kusvirwa kwandakaitwa kwainaka asi zvichirwadza as well, akandibata muchiuno apa zimboro rake rainyura richiita kutsemura beche rangu zvishoma. Mboro yainge yakareba iyoyo apa irikobvu.
Ndakamumisa ndikati achinje style nekuti iyi nainzwa kurwadziwa, akabva andirarisa patable iye akamira ndokutanga kukoira zvekuti ndainzwa zimboro rese richipinda nekubuda. Ndakasvirwa masasi zvekuti beche rangu rakapinda busy that day, ndakatanga kunzwa kunge munhu arikuda kuita weti zvikanzi haisi weti wakuda kutunda, regedzera hako unzwe kunaka kwazvo.
Ndakanzwa kuti tsaaaa tsaaa, ndichiona nyeredzi ndichigwinha gwinha, nekuchimerera ndichinzwa kudziirwa kunge ndirikunzwa chando kunge marariya kunge chiiko, asi kuri kunakirwa nemboro. Ndakashaya zvekuita nekuti this what first time kutundiswa nemukomana, ndakafunga kunorova tete nambuya kuti sei maisandiudza kuti mboro inonaka so.
Mboro yake yainyura